Iyo simbi fiber yekutadza yakanzwa inokwanisa kudzora kusefa chaiko uye kusvibiswa kweiyo imwechete inonzwa
na admin on 20-04-16
Iyo sintered mat yakagadzirwa ne micron diangle nonwovens, simbi uye yakakwirira kupisa sintered simbi nyuzi. Iyo yakawanda-dhaidhi simbi fiber mat inokwanisa kugadzira pore gradient kubva kune dzakasiyana pore layer, uye inokwanisa kudzora kusefera kunyatso uye kamwe-damba mat kusvibiswa. Inogona kuchengeta kuchera ...
Multilayer sintered simbi mesh rudzi rutsva rwemhando yemidziyo zvinhu zvine simba rakawanda uye yakazara kuomarara
Multilayer sint s mesered mesh rudzi rutsva rwemafirita ezvinhu zvine simba rakawanda uye yakazara kuomarara. Iyo yakagadzirwa ne multilayer simbi yakarukwa mesh uye inogadziriswa neyemahara lamination yekutsikirira uye vacuum sinching. Iyo mesh yakadzorwa kuti iite yunifomu uye yakakodzera dhizaini dhizaini. Haisi chete ove ...
Kuda kwemusika: mumusika unotevera, kudiwa kwechinhu chakapetwa mesh kuchenesa kuchawedzera. Nekukurumidza kukurumidza kwekugadzirwa kwemachira uye emakemikari indasitiri, sintered mesh filter element ichave neiyo musika wekugona kukurumidza kukura, uye musika wekuwedzera unowedzera zvishoma nezvishoma, uye wakakura ...